Omunye imisebenzi edume kunazo wemidlalo odumile oyiNgisi uWilliam Shakespeare - the play "Romeo and Juliet" (uhlobo sokudalwa - inhlekelele ethile). Lo msebenzi namanje bemthanda kumfundi wanamuhla, nabaqondisi Namanje liphefumulelwe indaba, ngokuphindaphindiwe ngokudlulisela yokungafi love story esikrinini futhi ekugqokeni ukusebenza kwakhe. Naphezu kwemizamo zabo ukuba baguqule lokho kudalwa umbhali ngendlela entsha, play namanje udonsa izethameli ngokunembile ngenxa yokuqala zayo eziyingqayizivele, wakwazi kabusha, mhlawumbe, kuphela Umhleli womdanso Italian F. Zeffirelli ngo-1966.
I ngokucacile isitayela
I esithinta inhliziyo kunazo zonke uthando indaba ezincwadini - Yebo, play "Romeo and Juliet". Uhlobo lo mkhiqizo ngezinye izikhathi kubangela ezinhlamvu ekubukweni kwezincwadi iqiniso lokuthi lokhu Sonnet Ukwakheka zolimi olubhalwayo. Ngakho-ke, it is benamandla nge bokubanga okusezingeni eliphezulu neyobuntu, okuyinto ehluke kakhulu engxoxweni classical izigemegeme ezenzeka esindayo kaShakespeare, okuyinto edala ngesikhathi imisebenzi yakhe ovuthiwe.
Ngenxa yalokho, abanye abagxeki bayakungabaza uthanda ukubiza umsebenzi wemidlalo "inhlekelele ukukhanya." Sinenkosi engqondweni yokuthi ngomoya umsindo ke benamandla injabulo futhi ukunqoba uthando, naphezu phakathi kwesiphetho esidabukisayo. Lena akuyona ejwayelekile imisebenzi kamuva wemidlalo, esibonakala by ikakhulukazi esigayegayeni idrama, kanye isihloko ukungabaza kubantu abavamile nje ( "Hamlet"). Uthathwa njengoba play, kunalokho - ingoma nobusha nothando, okuyinto kakhulu liwuhlukanise kusukela kweminye imisebenzi imbongi.
Yeka okuhlangenwe ulimi engavamile ukuba babhale indaba ka "Romeo and Juliet". Genre kunzima ukuchaza ngokucacile futhi ngenxa yokuthi izinhlamvu ukukhuluma isitayela senkondlo. Abagxeki abaningi etemibhalo kufanele aveze ukuthi umlobi wasebenzisa Sonnet ulimi okhethekile wokudlulisela uthando nakho abalingiswa. Lona omunye umehluko oyisisekelo phakathi izindaba eminye imisebenzi wemidlalo. Izimo ezimbili eziqeda kushiwo baphikisana labo baxgeki owambiza ngokuthi "inhlekelele ethile ukukhanya."
Izazi eziningi ziye kahle waveza ukuthi uShakespeare Sonnet njengokaputeni isitayela, kakhulu ngempumelelo okwenzeka kuye asankondlo ukudala izithombe izinhlamvu. Iqiniso lokuthi abengumsunguli wako wesiyingi sonnets, okuyinto zibhekwa esezingeni uthando izinkondlo. Shono nje kwathi lapho ubhala indaba abathandi ezimbili, wasebenzisa inkulumo elicwengiweyo olusankondlo, okwakunginika eyibhalela intuthuko akhethekile ngezilokotho.
Piece "Romeo and Juliet:" uhlobo okuyinto, naphezu kwalezi zici, nokho wazimisela nhlekelele, tiphawulo ayegcwele, lihlale linemibhikisho ngokuqhathanisa etemibhalo kanye nezinye izindlela yokukhuluma. Iphinde uqokomisa umsebenzi, phakathi kwezinye izincwadi umlobi. Imisebenzi kwesikhathi elivuthiwe umsebenzi wakhe uhluke ulimi esindayo, kuyilapho kubhekwe indaba Ubhalwe isitayela lula kakhulu futhi khulula okungukuthi sici ekuseni Shakespeare. Ngakho-ke, le ndaba kunzima ukuqonda ukuthi yini njengoba obukhulu njalo umqondo wegama. Kwezinye izindawo kubukeka sengathi uthando melodrama, futhi nabanye abantu - ngisho amahlaya behlakaniphile, naphezu kweqiniso lokuthi bakhula izinkanuko sina.
Ngakho, omunye wemisebenzi enzima kakhulu wemidlalo - ukudlala "Romeo and Juliet". Uhlobo usebenza kuhilela ukunamathela canons ezithile, ohlinzekela isiphetho esibuhlungu. Nokho, abagxeki abaningi kufanele aveze ukuthi ukuphela edabukisayo ukukhanya akusho konakalisa umuzwa ukuthi usenza play nokufunda kwakhe. Ngempela, ukufa okubuhlungu hero ubonakala ukunqoba futhi ngokunqoba uthando abasha. Kule umbono indaba yehlukile izindaba okukhulu kwesikhathi ngasekupheleni somlobi.
Umsunguli idrama yesimanje kanye yaseshashalazini ubhekwa Shakespeare. "Romeo and Juliet" (uhlobo imisebenzi, njengoba kushiwo ngenhla, ebizwa ngokuthi abacwaningi yesimanje njengoba nhlekelele ukukhanya) - lena indaba akuyona efana Umlando kanye nezinye wemidlalo play. umkhiqizo Ukwakheka ulula: imindeni emibili ngesikhathi impi, kodwa izingane zabo ukuthandana nothile futhi kabaze baba lakho ukuma izithiyo ukuzibulala. Kuyaziwa ukuthi umbhali ngokuvamile wahosha oluvela ngamasiko asendulo, ngisho ezinganekwaneni zasendulo. Ngineminyaka engu azihlukile kanye play "Romeo and Juliet". Yini uhlobo imisebenzi ezivela kuye? Lona umbuzo of interest abacwaningi abaningi, ngisho esikhathini sethu, lapho kubonakala sengathi inkinga isivele ixazululwe in kwemibhalo.
Inkinga iwukuthi esiqintini play akuyona kakhulu efana le nhlekelele zakudala. Naphezu izinkanuko, indaba nokho ubeka into ehluke kakhulu ezihlekisayo futhi ngezinye izikhathi ngisho nejabulisayo. Yonke idrama uvezwa njengomuntu ukukhanya, kancane edabukisayo ngendlela futhi, ngokushesha, ingase zifane uthando melodrama, uma kungekhona amandla nakho kanye nokujula imizwa izinhlamvu.
On amakilasi izincwadi angaphandle abafundi angaphakamisa indzaba leyakheke isihloko "Uilyam Shekspir. "Romeo and Juliet": uhlobo imisebenzi ". Abafundi uzame ukuqagela kulesi sihloko, ukuhlaziya isimo abalingiswa nezenzo zabo. Kufanele kuqashelwe ukuthi abadlali nhlekelele futhi ungathandi izinhlamvu drama classical. Bonke ngokuphamazela, kodwa hhayi uthukuthele, ngokomzwelo, uhluthuke, nabazidlayo, kepha okwazi magnanimity, izwele kakhulu futhi ngokubona. Lesi sici kusebenza, mhlawumbe, wonke amaqhawe ezibangela uzwela, isihawu, uzwela noma uzwela, kodwa ungalokothi - ukucasuka noma zinyanyise.
Ngo amadrama classical njengoba umlingisi losemcoka, njengoba umthetho, kukhona isitha eye lonakele ubugebengu udumo noma ngenkohliso. Ngokucabangela play omunye abadlali akuyona neze uhlamvu engalunganga, njalo futhi siyingozi nobunzima kulabo ichaza uhlobo incwadi "Romeo and Juliet".
Lolu cwaningo izici zalesi play ibaluleke kakhulu ekuqondeni lokusungula ahlukahlukene kanjani futhi enezici somlobi. Shakespeare wadala inani elikhulu imisebenzi ngempela ezingafani, ukuthi kunenkinga ngisho ubuqambi etemibhalo lezi zincwadi. Kukhona umbono wokuthi zonke lezi etindzabeni letibhaliwe omunye umuntu noma abalobi ngaphezulu.
Nokho, ukudlala buhlobene eduze sonnets imbongi, futhi ilindele eziningi nhlekelele yakhe. Lokhu kusho ukuthi umsebenzi kwaba isehlakalo esibaluleke kakhulu emsebenzini wemidlalo, ngubani uncome lo mlando yezinto bobusha bakhe senkondlo. Futhi ngesikhathi esifanayo ke wathatha isinyathelo sokuqala ezinkulu maqondana kudalwa udlala sina okukhulu.
Indaba efingqiwe: "Three Fat Abesilisa" Yuri Olesha
Vyacheslav Kondratyev. "Sasha": isifinyezo sezinto indaba